हामी सबै आफ्नै उद्देश्यका लागि राम्रो सफ्टवेयर प्रयोग गर्न प्रेम। उदाहरणका लागि, ग्राफिक्स को लागि, PDF फाइलहरू, राम्रो खेल चलिरहेको त्यसैले सम्पादन र। ई यो प्रयोग गर्ने अधिकार प्राप्त गर्न आवश्यक अक्सर छ। तर सबैलाई यो उद्देश्य लागि आफ्नो हार्ड-कमाएका पैसा बाहिर राख्नु मौका (वा इच्छा) छ। यस मामला मा, ह्याकरहरूलाई भनेर भुक्तानी प्रक्रिया छल्न गर्न अनुमति विशेष कार्यक्रम लेख्नुहोस्। यो सफ्टवेयर "दरार" मानिसहरूलाई भनिन्छ।
हामी गलत छ के र व्यवस्था विरुद्ध ध्यान केन्द्रित हुनेछ, त्यस्तो सफ्टवेयर प्रयोग गर्न सक्दैन भनेर। यो त स्पष्ट छ, अझै धेरै प्रयोगकर्ताहरूले यो अवसर प्रयोग खुसी छन्। यो यसको प्रयोग गर्ने सम्भावित परिणाम को "दरार" आज, बस तपाईं भन।
तसर्थ, यस शब्द अंग्रेजी भाषा देखि उधारो गरिएको छ। शाब्दिक मूल्य दरार - एक धमाका साथ «ब्रेक"। सुरु-कार्यक्रम बस प्रयोगको लागि रोक चेक भुक्तानीको एक परिणाम हो जो वा त्यहाँ गरिएको छ भुक्तानी सफ्टवेयर को कोड, केही परिवर्तनहरू बनाउन "दरार"। यो एक समान सिद्धान्त र "पैच" मा काम उल्लेख गर्नुपर्छ। आफ्नो फरक उत्तरार्द्ध सफ्टवेयर विभिन्न त्रुटिहरू र कमजोरीहरू "Hack" वा सही रूपमा हुन सक्छ भन्ने तथ्यलाई मा निहित।
तर फिर्ता हाम्रो "भेडा" गर्न। अक्सर यो सबैभन्दा लोकप्रिय अपरेटिङ सिस्टम छ, र सफ्टवेयर को बहुमत उनको लागि विशेष लेखिएको छ किनकी, Windows को लागि "दरार" प्रयोग। प्रयोगकर्ता भुक्तानी को रद्द गर्न साथै, यो ह्याकर अक्सर सफ्टवेयर सक्षम आफ्नो कम्प्युटरमा हानि गर्न, कि सम्झना गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, इन्टरनेट मार्फत "दरार" स्थापना गर्दा आफ्नो निर्माता संग सम्बन्धित र उपयुक्त निर्देशन यसलाई प्रदर्शन गर्न आवश्यक छ कि प्राप्त छ। उदाहरणका लागि, विशिष्ट फाइल र यति मा संक्रमित, केही डाटा स्थानान्तरण गर्न, केही सेवाहरू बन्द।
लेख्नका लागि मनसाय
तपाईं एक "दरार" के बुझ्न शुरू गर्दै छन्? यो धेरै अक्सर किनभने के केही ideological मनसाय वा altruistic झुकाव को लेख्न छैन छ। सफ्टवेयरको लेखक, सामान्यतया केही व्यक्तिगत चासो pursues। अक्सर, प्रणाली स्थापना गर्दा "ट्रोजन घोडा" खाता वा केही खाताहरू, तपाईंको पासवर्ड "चुरा" जो कार्यक्रम, हुन्छ बैंक विवरण र यति मा।
को समुद्री डाकू एक समयमा "Piggy" को लोकप्रिय संस्करण को धेरै प्रयोगकर्ताहरूले यो "दरार", र यो को परिणाम पनि हुन सक्छ के पूर्णतया लाग्यो। सञ्चालन प्रणाली को लाइसेन्स प्रमाणिकरण निष्क्रिय गरिँदै गर्दा नवीनतम "ट्रोजन" संक्रमित भएको थियो। यसको सबै नतिजा संग। पछि धेरै उन्नत antiviral कार्यक्रम बस देखाउनका थिएन लामो समय विरोधी-भाइरस सफ्टवेयर लागि, यो समस्या मद्दत गर्न सक्छ।
तपाईं के भने, जो कारण लागि, तपाईं कार्यक्रम दरार, यो दृढता एन्टिभाइरस एक अतिरिक्त स्थापना बाहेक सुझाव छ प्रयोग "फायरवाल।" आखिर, उत्तरार्द्ध प्रणाली मा शंकास्पद गतिविधि पत्ता लगाउन र तपाईं यसको बारे चेतावनी गर्न अनुमति दिन्छ। विशेष ध्यान खेल लागि "दरार" भुक्तान गर्नुपर्छ। यो खराब आश्चर्य संग "घुसपैठियों" को लागि खेल को धेरै उत्पादन।
यस्तो सफ्टवेयर को हानिकारक प्रभाव अर्को उदाहरण। यस समयमा, त्यहाँ शब्द को truest अर्थमा चोरी छ। कार्यक्रम एक सन्देश विशेष छोटो नम्बरमा, ostensibly इच्छित प्रमुख प्राप्त गर्न पठाउन प्रयोगकर्ता आवश्यक छ। वास्तवमा, यो आवश्यकता को प्रदर्शन, तपाईँको मोबाइल खाता बाट सबै पैसा अज्ञात दिशा मा सूचीबद्ध गरिनेछ। प्रमुख तपाईंले प्राप्त र हुने छैन।
एन्टी-भाइरस सफ्टवेयर असक्षम छैन राम्रो छ
साथै, हामी थप एक सुविधा "चर्किएको" बेवास्ता गर्न सक्दैनन्। प्रयोग वा यो सफ्टवेयर प्रयोग गर्न प्रयास गरेको छ जो कोहीले, अन्ततः तपाईं आफ्नो रन समयमा विरोधी-भाइरस कार्यक्रम असक्षम पर्छ कि सिफारिस संग सामना। एक परिणाम जो "दरार" को समस्या असफल रूपमा मानिन्छ गलत सकारात्मक अलार्म भयो गर्न यो गर्नै पर्छ।
यो कथन सत्य को एक भाग हो। साँच्चै "antivirusniki" प्रतिलिपि अधिकार विकासकर्ताहरूले तिनीहरूले साँच्चै मात्र बाइपास प्रक्रिया सक्रियता शुल्क हो भने पनि कहीं खराब सफ्टवेयर गर्न "चर्किएको", समावेश गर्नुहोस्। तर तपाईं अब यी "अहानिकारक" धेरै सानो programmok भन्ने तथ्यलाई बुझ्न छन्। र सबै भन्दा संभावना छ, तपाईंले आफ्नो कम्प्युटरमा सुरक्षा असक्षम गर्नुभयो भने, प्रणाली केही खराब "एजेन्ट" भित्र पस्नु हुनेछ। हामी आशा छ कि तपाईं यो "दरार" बुझ्छु।
के छ र कसरी Google Chrome मा दृश्य बुकमार्क प्रयोग गर्न
कसरी केही सरल प्रविधी, विन्डोज 10 मा लक स्क्रिनमा असक्षम?
गिम्प GenericName मा रूसी निःशुल्क डाउनलोड
GameNet कांटे - हटाउन कसरी? आदेश रेखाबाट कार्यक्रम हटाउँदै
रूसी संघ को नागरिक रक्षा के हो? नागरिक रक्षा सुविधाहरु
तमिलले को हो? जीवनका वर्ष, जीवनी, लडाइँ र तमिललेको विजय